Tsika Kupedzisa Kurapa Service Sevhisi & Mugadziri | Hengli Metal Kugadziriswa
Yedu yekupenda mashandiro akavakirwa pane yakasimbiswa ISO 9001: 2015 Quality Management Systems. Isu tinopa yakakwira-ku-zuva semi automated yakanyorova pendi sevhisi, iyo inosanganisira yepamhepo makemikari etching nzvimbo, yakaoma nzvimbo, yemazuva ano electrostatic spray dumba uye yakakura saizi maindasitiri hovhoni. Kazhinji tinopenda irwo rudzi rwezvinhu zvinotevera: zvikamu zvemuchina weindasitiri, zvikamu zvemuchina wekurima, zvikamu zvemuchina wekuvaka nezvimwe.
Yedu yakanyorova pendi nyanzvi dzinoendesa mhando, inodhura poda kupfeka yezvese zvako simbi yekupedzisa zvaunoda! PaHengli pendi yemusangano chinangwa chedu ndechekupa vatinoshanda navo basa rinoenderana, remhando yepamusoro, rakapora. Unyanzvi hwedu hunobva pamakore gumi nemasere ekuputira akasiyana zvigadzirwa kune zvakawanda zvinoshandiswa. Munguva ino takaunganidza hupfumi hunoremekedzwa hwezivo uye ruzivo rwune chekuita nehunyanzvi hwazvino hwekunyorova. Isu tinonzwisisa kuti yega yekunyorera yekushandisa inogona kuunza yakasarudzika seti yematambudziko. Ichi chiitiko uye ruzivo rwunoita kuti tikwanise kupa yakanyanya inochinjika, isingadhuri sevhisi kune vatengi vane zvakawanda zvakasiyana zvinodiwa.
Yedu QC inonyatsoongorora yega yega yega yezvikamu zvako usati wasununguka. Yakasimudzwa, kana kuunzwa kwauri, nhengo dzako dzinosvika dzakagadzirira kushandisa pasina kukuvara!
Hengli ane ruzivo rwevapendi anovimbisa chakanakisa chakapedzwa chigadzirwa. Kubva kugadzirira kwepamusoro uye-mumba sandblasting kune hunyanzvi hwakaisirwa, yakasimba yakasimba, yakasununguka nharaunda, yekushongedza magumo! Maitiro edu ekubheka anovimbisa kuti hapana anomhanya, anodonhedza kana sags mukushandisa kweye nyoro pendi maitiro.
Kunze kwezvo, HDG, zinc yakanamirwa pamoto, anodizing, simba-kupfeka, Zinc-Yakaiswa, Chrome yakavharwa, Nickel Yakapetwa nezvimwe, zvakare zvine hunyanzvi zvinopihwa nevatinoshanda navo. Izvo zvinogona kusangana nechikumbiro chako chakasiyana.
Pashure: Plasma & Flame Kucheka Service
Zvadaro: CNC Bending Service